रामचन्द्र पौडेल भन्छन्- सत्ता होइन, व्यवस्था जोगाउनु महत्त्वपूर्ण
नेपाल लाइभ शनिबार, चैत ७, २०७७, १८:३१
काठमाडाैं- नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले व्यवस्था जोगाउन कांग्रेस लाग्‍नुपर्ने बताएका छन्। उनले अहिले सत्तालाई भन्दा पनि व्यवस्थालाई महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए।
'संविधान नै फाल्ने कोसिस गर्ने, संसद् नै फाल्न फेरि पनि मैमत्ता हुने केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्‍नका लागि कांग्रेस अगाडि आउनुपर्छ। कांग्रेस मौन बस्ने बेला होइन। कांग्रेसले यस्तो अलमल गर्न सुहाउँदैन,' नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले काठमाडौंमा कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ११औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने।
उनले निर्णायक छैनौँ भनेर बस्‍नुभन्दा निर्णायक बन्‍ने कोसिस गर्नुपर्ने बताए। 'संकटको बेलामा खरो उत्रने कोसिस गरेमात्रै जनताले भरोसा गर्नेछन्। सत्तालाई भन्दा ब्यवस्थालाई महत्व दिउँ। व्यवस्था बच्यो भने सत्ता पटक-पटक आउँछ। संसद् पुनर्स्थापना भएपछि व्यवस्था बचेको छ। तर, यो व्यवस्थालाई विकृत बनाएर बदनाम गराउन लागेका छन, हामीले जोगाउनुपर्छ,' पौडेलले भने।
उनले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा अरुलाई अघि बढाएर भए पनि ओलीको विकल्प खोज्‍नुपर्ने बताएका छन्। ‘अहिलेको संसद्‍मा हाम्रो पार्टी नेतृत्वले गर्ने काम, संसदमा रहेका पार्टीहरुमध्ये को-कोसँग मिलाएर/मिलेर के गरेर हुन्छ, कसैलाई अगाडि बढाएर हुन्छ कि आफू अगाडि बढेर हुन्छ, अहिलेको केपी ओली जसले यत्रो ठूलो उत्पात गरे। उधुम गरे। तिनको विकल्पमा नयाँ सशक्त विकल्प प्रस्तुत गर्नका लागि संयोजनकारी भूमिका नेपाली कांग्रेसले खेल्नुपर्छ,' उनले भने।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले चुनावको पक्षमा बोल्ने गरेको भन्दै उनले नेपाली कांग्रेसले चुनावको पक्षमा वकालत गर्न नहुने बताए। संसद्‍मा भएका शक्तिहरुलाई समायोजन गरेरै विकल्प दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। पौडेलले भने- ‘अदालतको फैसलाले पाँच वर्ष नभई चुनाव गर्ने अनुमति दिँदैन। संसद् फेरि विघटन गर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन। त्यस्तो बेलामा मङ्सिरमा चुनाव गर्छु, आउँदो फागुनमा चुनाव गर्छु भन्दै हिँड्ने? कहाँनेर कता फस्दै गयौँ हामी? कसले फसाउन खोज्यो? हामीले अहिले चुनावको कुरा होइन। हामीले त यही संसद्‍लाई कसरी उपयोग गर्ने? यही संसद्‍मा भएका शक्तिहरुलाई समायोजन गरेर अहिले विकल्प दिने हो।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतन्त्र पक्षधरहरुको सरकार बन्‍नुपर्ने बताए। संविधान बचाउने सरकार ल्याउन र व्यवस्था बचाउने शक्ति यही संसदभित्र निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले कुशलता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।